IQing Gong - IQigong yoBugcisa boBugcisa bokuKhanya
I-Qing Gong (nayo iphantsi i-Ching Gung) yindlela yokwenza ubuciko obukhulu kakhulu ekuziphatheni komzimba, ngokuguqula ukuhambisa nokuhamba kwe-qi. (Cinga ngemifanekiso yokulwa kwiifilimu zikaJet Li "I-Crouching Tiger, Dragon Hidden" okanye "Hero.") Iingcali ze-qigong eziphakamileyo ezifana ne-Master Zhou Ting-Jue ziye zahlakulela kwaye zabonisa ubuchule bokuQing Gong. Ngokumalunga neendlela zamaHindu zo-yoga, amandla afanayo "okukhanya" (iSanskrit: laghiman ) ichazwa kwi-Yoga Sutras ye-Patagali (III: 45) - njengobungqina bombono ocamngca ngamandla angundoqo.
Ngaba ngokuqinisekileyo izinto ezibonakalayo ezingenakwenzekayo, kunokwenzeka, umbuzo onomdla kakhulu! Ingaba imithetho ye-physics, ubuncinane kwiimeko ezithile, ingadluliselwa?
Funda ngakumbi: Makubekho ukuKhanya - iMatrix & Lightwep Metals kwiNondual Traditions Traditions
Njengoko kuvela, ixesha kunye nendawo "ngokungaqhelekanga" kunokuba sinokuzicingela ukuba. U-Albert Einstein ukuqonda kwixesha lokuchitha indawo, ngokomzekelo, wayehluke kakhulu kwii-Isaac Newton.
Funda ngakumbi: Isikhundla, i-Final Frontier? - Iifayile zeNdawo zoLwazi lweTao noQoqosho olulungileyo
Yaye yethu indlela yokuzimela okanye yengqondo yeso sihlandlo ehluke ngokupheleleyo kunokuba "ixesha elinjongo."
Oko kuthetha ukuthini ukuba indawo kunye nexesha lingaba lukhulu kakhulu oluthileyo lokuba sicinga ukuba. Kwaye nangona iinguvo zethu zengqondo zixhomekeke kwisimo somzimba wethu ngomzimba wayo, kunesimo sengqondo esicacileyo - okanye "ukuqonda" -kusebenza ngokuzimeleyo kwizitho zantlanu zengqondo.
Ukunikezelwa konke oku, ngaba kunjalo ngokwenene ukuvumela ukuba kube khona ukubonakala "kumangalisa"? I-Qigong kunye nezobugcisa be-kartial eziye zahlakulela izidumbu zazo ngaphaya kwezinto eziqhelekileyo kumntu, ziyakwenza izinto ezininzi zethu ezingenako. IQing Gong ngumzekelo omnye walo.
Kwakhona kufanelekile ukukhankanya, nangona-ukuvala le ncoko -ba ootitshala bokomoya baphinda bacebise ngokuchasene nokuqhotyoshelweyo kumandla amangalisayo. Kunoko, kulungele ukuzijonga nje ngokuba "iziqhamo" okanye "iintyatyambo" zesenzo sethu, iingcambu zawo zijonge kakhulu. NjengoParamahansa Yogananda wathi, ngokubhekiselele kwingcaciso kaPatanjali yamagunya (oko kukuthi "vibhutis"):
"I-Patanjali ilumkisa ukuba umntu onobubele kunye noMoya kufuneka abe yinjongo yodwa, kungekhona i-vibhutis - iindumiso ezihamba phambili kunye nomendo oyingcwele.
Yintoni ekugqibeleni ibaluleke kakhulu, ngamanye amazwi, kukukwazi ukuqonda nokuhlala kwi-ID yethu yoQeqesho oluNgcono, Ingqondo yeTao-kunokuba ibonakale yinto enokwenzeka. Amandla amangalisayo aya kubonakala, ukuba kwaye xa afunekayo, kwaye ngelixa banako ukuzonwabisa (ngenjongo enenzuzo), sifanele sibaphephe ukuba banike into engabalulekanga.
Uthando, Umtshato kunye noBuddha
Ngubani owayenguSantawa uAgasine? - Biographic Profile
Ukuphila okufanelekileyo: I-Ethics of Learning the Living
Isango leTabernakele leNkundla
30 Shaheed Singh Martyrs we-Rajput Clan
I-Bubble in Stream
IJwala elinyukayo kwiSizwe seSizwe seSizwe samaJoshuwa
Iingcamango zeParti yeHalloween kwiiKlasi zokuQala
UbuBuddha eChina naseTibet Namhlanje
Ileta yeSincomo Sampululo - Isiphakamiso seHarvard
Umbhali uRay Buckland
Ulwabiwo lweMveli kuMculo: Ukusuka eMadonna ukuya kuMiley Cyrus
I-Biography kaMarc Chagall, uMculi weNkcubeko kunye neNkanuko
I-Gant Ground Sloth (Megalonyx)
Ukuqwalasela idatha yeFomu nge-PHP
Ukuqonda iMpawu zeMercury kwiGemini
IYunivesithi yaseGeorgia GPA, SAT, kunye ne-ACT Data